Micrometer: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ichi chishandiso | Mahara emahara
Kunyangwe zvingaite senge chikamu chehurefu, pa micrometer tiri kureva pano chiridzwa chakatumidzwa. Iyo inozivikanwa zvakare se palmer gauge, uye inogona kuve chishandiso chakakosha kune chero chinhu musangano wemugadziri kana kune avo vanofarira DIY, nekuti inobvumidza kuyera nehukuru hwakanyanya izvo zvimwe zviridzwa zvisingakwanise.
Muchikamu chino iwe unodzidza zvishoma nezvazvo chii icho, ndechei, inoshanda sei, pamwe nemakiyi ekusarudza yakanaka kune ako mapurojekiti emangwana ...
1 Chii chinonzi micrometer?
1.2 Zvikamu zveiyo micrometer
1.3 Mashandiro anoita palmer micrometer kana caliper
2 Kwokutenga micrometer
Chii chinonzi micrometer?
El micrometer, kana Palmer caliper, chimbo chakayera chaizvo. Seizvo zita rayo rinoratidzira, rinoshandiswa kuyera zvinhu zvehukuru hudiki kwazvo nemazvo chaizvo. Kazhinji, vanowanzove nekanganiso shoma, vachikwanisa kuyera kunyangwe kusvika zana (0,01 mm) kana zviuru (0,001 mm) zvemamirimita.
Chitarisiko chayo chinokuyeuchidza zvakawanda zve vernier caliper kana geji zvakajairika. Muchokwadi, mashandiro ainoita akafanana chaizvo. Shandisa sikuru ine chiyero chakapedza kudzidza icho chinoshandiswa kuona kuyerwa. Midziyo iyi inobata magumo echinhu chinofanira kuyerwa, uye kutarisa pachiyero chayo uchawana mhedzisiro yechiyero. Ehe, ine hushoma uye hwakawanda, kazhinji iri 0-25 mm, kunyangwe paine mamwe mahombe.
Con maindasitiriKunyanya panguva yeRevolution Revolution, kufarira kukuru kuyera zvinhu chaizvo zvakatanga kukura. Zvishandiso zvaishandiswa panguva iyoyo, senge zvakajairwa gaji, kana mamita, zvaive zvisina kukwana.
Mutsara wezvakagadzirwa zvekare, senge micrometer sikuruu ye William Gascoigne yegumi nematanhatu, vakaunza shanduko yeiyo vernier kana vernier inoshandiswa mune zvakaenzana zvenguva. Astronomy yaive imwe yematanho ekutanga kwaizoiswa, kuyera madaro chaizvo neteresikopu.
Gare gare kwaizouya kumwe kugadziridzwa uye kuvandudzwa kwerudzi urwu rwechiridzwa. Kufanana neFrance Jean-Laurent Palmer, uyo muna 1848, akavaka kutanga kwekutanga kwemaoko ekudzivirira micrometer. Iyo yekugadzira yakaratidzirwa muParis muna 1867, uko kwaizokwezva kutarisa kwaJoseph Brown naLucius Sharpe (weBrown & Sharpe), uyo akatanga kuigadzira sechishandiso muhuwandu muna 1868.
Chiitiko ichi chakarerutsa kuti vashandi vepamusangano vanogona kuvimba nechokushandisa chakanyatsojeka kupfuura avo vavaimbove. Asi zvaisazove kusvika 1890, apo muzvinabhizinesi weAmerica uye muvambi Laroy Sunderland Starrett ndakagadzirisa iyo micrometer uye patent imwe yazvino fomu yacho. Uye zvakare, akatanga iyo Starrett kambani, imwe yevanogadzira makuru ekuyera zviridzwa nhasi.
Zvikamu zveiyo micrometer
Mumufananidzo uri pamusoro apa unogona kuona zvikamu zvakakosha zvePalmer caliper kana micrometer. Vari zvikamu Ndizvo:
1. Mutumbi: ndicho chidimbu chesimbi chinoumba furemu. Yakagadzirwa kubva pane chinhu chisingasiyane zvakanyanya neshanduko shanduko, ndiko kuti, nekuwedzera uye kudzvinyirira, nekuti izvi zvinogona kukonzera zvisizvo zvisirizvo kutorwa.
2. Tope: ndiyo iyo ichaona iyo 0 yechiyero. Izvo zvakakosha kuti inogadzirwa neyakaomarara zvinhu, senge simbi, kudzivirira kusakara uye kubvarura uye inogona kuchinja kuyerwa.
3. Spike: icho chinhu chemafoni chinozoona kuyerwa kwemicrometer. Iyi ndiyo ichave inofamba apo iwe unoshandura sikuru kusvikira yaonana nechikamu. Ndokunge, nhambwe iri pakati pekumusoro nespike ndiyo ichave chiyero. Saizvozvowo, inowanzo gadzirwa nezvinhu zvakafanana nepamusoro.
4. Kugadzirisa lever: inokutendera kuti uvhare kufamba kwespike kugadzirisa chiyero kuti chisatombofamba, kunyangwe iwe wabvisa chidimbu kuyera.
5. Ratchet: Icho chikamu chinogumira simba rinoshandiswa kana uchiita chiyero chekubata. Inogona kugadziriswa zviri nyore.
6. Nhare mbozha: Apa ndipo panonyorwa chiyero chakanyanya kuyerwa, mumakumi emamirimita. Ivo vane vernier vanozovezve neimwe yechipiri sikero yeakanyanya kunyatsoita, kunyangwe chiuru chemamirimita.
7. Yakagadziriswa dhiramu: ndipo panotsanangurwa chiyero chakamisikidzwa. Mutsetse wega wega millimeter imwe, uye zvinoenderana nekwakamiswa madhiramu, ndiyo ichave chiyero.
Mashandiro anoita palmer micrometer kana caliper
Iyo micrometer ine yakapusa musimboti. Iyo yakavakirwa pa sikuruu kushandura diki diki dzekubva muchiyero chaicho nekuda kwechikero chayo. Mushandisi werudzi urwu rwechishandiso anozokwanisa kupeta sikuruwa kusvikira matipi ekuyera asangana nepamusoro pechinhu chinofanira kuyerwa.
Nekutarisa kumaka padhiramu rakapedza kudzidza, kuyerwa kunogona kutemwa. Pamusoro pezvo, mazhinji ema Micrometer aya anosanganisira a vernier, iyo inobvumidza kuverenga kwezviyero nezvikamu nekuda kwekuiswa kwechikamu chidiki.
Ehe, kusiyana neyakajairwa caliper kana caliper, Palmer chete matanho kunze kwemadhayamita kana marefu. Iwe unotoziva kuti iyo yakajairika geji zvakare inokwanisa kuyera mukati madhaimendi, uye kunyangwe zvakadzika ... Zvisinei, sezvamuchaona muchikamu chinotevera, kune mamwe marudzi anogona kugadzirisa izvi.
Kune dzakawanda micrometer mhando. Zvichienderana nenzira yekuverenga, vanogona kuve:
Unyanzvi: iwo anongori echinyorwa, uye kuverenga kunoitwa nekududzira chiyero chakanyorwa.
digitaalinen: ndevemagetsi, ine LCD skrini uko kuverenga kunoratidzwa kuitira kureruka.
Ivo vanogona zvakare kukamurwa kuita maviri maererano ne mhando yemayuniti anoshanda:
Decimal system: ivo vanoshandisa iyo SI zviyero, ndokuti, metric system, ine mamirimita kana submultiples ayo.
Saxon maitiro: shandisa inches se base.
Zvinoenderana nezvavanopima, iwe unogona zvakare kusangana nema micrometer senge:
Estándar: ndeavo vanoyera kureba kana hupamhi hwezvidimbu.
Zvakadzika: iwo mhando yakakosha ine rutsigiro ine zvimira zviviri kana hwaro hunogara pamusoro. Ipo spike inobuda yakanangana nechigadziko kubata pasi uye nekudaro kuyera zvakadzika nenzira kwayo.
Indoor: Izvo zvinoshandurwazve nezvidimbu zviviri zvekuyera kuyera madaro kana madhimoni emukati nenzira kwayo, senge mukati mechubhu, nezvimwe.
Kune dzimwe nzira dzeku that catalog them, asi izvi ndizvo zvakakosha.
Kana iwe uchida tenga mhando uye yakajeka micrometer, heano mamwe mazano anogona kukufadza:
Proster analogog kunze micrometer (0-25 mm ine 0.1 mm kudzidza).
Beslands dijiti yekunze micrometer (0-25mm ine 0.001mm kudzidza) ine LCD inoratidzira.
Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
Mitutoyo MT128-101 Analog Kudzika Micrometer (0-25mm).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » General » Micrometer: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ichi chishandiso
1n4148: zvese nezve zvakajairwa chinangwa diode